Dr. Tint Swe's Writings: လည်းကောင်း နဲ့ ၎င်း မတူပါ
ဆရာတင်ထားတဲ့ အကြွေစိလေးမှာ တပြားကို ၁ါးလို့ ရေးထားတာ အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဂဏာန်း သင်္ချာနဲ့ အက္ခရာကို တွဲရေးထားတယ်။ နောက် ဥပမာတခုက လည်းကောင်းကို ၎င်းလို့လည်းရေးတယ်နော်ဆရာ။ အဲလို အရေးအသားပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ ခင်ဗျ။
အရင်က အဲလိုတွေ ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကသတ်ကိုလည်း သေးသေးတင်နဲ့ရေးတယ်။ ဥပမာ မြောက် ကို မြောံ။
၎င်း ဆိုတာ ထို၊ ယင်း၊ အနှီ၊ ဤ၊ နည်းတူဖြစ်တယ်။ လည်းကောင်းအစားသုံးလို့ မရတာတွေရှိတယ်။ ၎င်းအရာ၊ ၎င်းကိစ္စ၊ ၎င်းမင်းသမီး၊ ၎င်းဇာတ်ကား စသည်။ ၄င်း မဟုတ်ပါ။
၎င်းရော လည်းကောင်းပါ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးနိုင်လို့ထင်ပါတယ်
၄င်း သည် ဘယ် စာလုံးကိုယူတာလည်းဆရာ ဗျည်း ၃၃လုံးထဲကဘယ်အလုံးလည်းဆရာ
သီးခြားစာလုံးဖြစ်။ င တချောင်းငင်လည်း မဟုတ်။ ဟထိုးလည်း မဟုတ်။ ဂဏန်း ၄ ကနေဆင်းသက်လာ။ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်မှာတော့ ထွင်ပေးထား။ အဲတာက နောက်ပေါက်။
ဒါဆို ၁၂၃၄ က ၄လားဆရာ မနေ့ကပဲ လည်းကောင်းအကြောင်းကလေးများကိုပြောပြလိုက်သေးတယ် ၄င်းကို မသုံးသင့်ကြောင်း ပြောမိသေး။ အချက်အလက်နဲ့ ပြန်ရှင်းပြချင်မိလို့ပါ။
၄င်း (၎င်း) ရော လည်းကောင်းပါ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးနိုင်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆရာရေ ထပ်မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်း ထိုသို့ဆင်းသက်လာသည်ဟု ထင်မိသဖြင့် မသုံးသင့်ကြောင်း ပြောမိလိုက်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ဘယ်အချိန်ကစသုံးလည်းတိတိကျကျမသိသလို ကာလရွေ့လျားလို့ပြောင်းလဲသွားတာလား အလွယ်လိုက်ကြတာလား ထွင်တာလား မသိပါ ဆရာရေးသလို ဤ ထို ယင်း အနီ စတာတွေကို အခြားစကားလုံးသုံးရင် ပိုကောင်းမလားဆရာ စကားလုံးအပျက်တွေကို စကားပြေတွေ ဆောင်းပါးတွေ သတင်းတွေမှာမသုံးမှ ကလေးတွေဆီ မရောက်လာမှာပါလို့ထင်ပါတယ် ပြန်ရေးပါဦးဆရာ
၁၉၆၉ ခုနှစ်ထုတ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးသားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းမြန်မာရာဇဝင်စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၁။ ၎င်းပျူဟူသောအမည် ပါရှိနေသေးသဖြင့်
ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ထိုနည်းလည်းကောင်း စီးပွါးရေးအခြေအနေကောင်းလို့ ကျန်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။ (ရွှေမန်းတင်မောင်)
Ditto ၎င်း အဆက်
စာရင်းတွေရေးတဲ့အခါ အထက်စာကြောင်းအတိုင်းတူနေတာကို ၎င်းလို့သာရေးလေ့ရှိကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို
Ditto (do) အထက်ပါအတိုင်းနဲ့ တူတယ်။
Ditto means the same as what has already been said, the same as what has been written above, the same as what has been written before. Ditto may beanoun, the plural is dittos. Ditto may also be an adverb. By the 1670s, ditto came to mean the same as above or aforesaid, in written English.
ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ထိုနည်းလည်းကောင်း စီးပွါးရေးအခြေအနေကောင်းလို့ ကျန်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါသည် (ရွှေမန်းတင်မောင်)။ Smile!